Na-egosi izipu site na Jenụwarị, 2020
Mgbidi nke nnukwu ụlọ Frýdštejn 360 panorama
Frýdštejn bụ ụlọ mbibi dị n'obodo Frýdštejn nke dị nso na Malá Skály na mpaghara Jablonec nad Nisou.
Onye na-achị nnukwu ụlọ elu bụ nnukwu ụlọ elu nnukwu ụlọ, nke e wuru n’elu oke okwute kachasị elu, site na ebe ị ga-ahụ ndagwurugwu ahụ dum. Lọ elu ahụ dị mita 15 n’ogologo, nwee nkezi nke 9 mita na mgbidi ahụ nwere oke nke 2 mita.
Pojizeří si 13. narị afọ nke Markvatics. A maara 1363 dị ka ndị nwe obodo gburugburu Hodkovice, ndị nwe obodo Dražice na 1376 Jan II. site na Bibrštejn, ezinụlọ Bibrstejn bi na Frýdlant nwere ike guzoro na nnukwu ụlọ ahụ.
Mbụ a kpọtụrụ aha Frýdštejn sitere n'afọ 1385, ihe ndekọ ndị ahụ n'afọ ahụ kpọrọ Bohunka Puklíce si Frýdštejn. Gburugburu afọ nke 1400 ụlọ ndị ahụ bụ ndị Kamenci nwere site na Střížovice na Čakovice.
Ná mmalite narị afọ nke 15 Bohuš nke Kováně ghọrọ onye nwe ala. Na 1432 ndị Hussites gbara ama site n'aka Otto nke Loza na Jan Čapek nke Sán. Katọlik Bohuš nke Kováně buru ụzọ kwekọrịta na ndị Hus, bụ onye mechara gbanwee ma na 1448 nyeere Jiří nke Poděbrady aka imeri Prague. Mgbe Bohuslav nwụrụ na 1460 ọ…
Na 1884 František Ji…
Lelee isi ihe egwuregwu wụliri elu na Lomnice nad Popelkou
Nnukwu nlele ahụ dị na akwa K-70 bụ nke a rụnyere na sket ebe V Popelkách dị. Kwgba ije a na-eme ebe dị 28 m na-enye ọmarịcha nlele ọ bụghị naanị mpaghara sịnịma kamakwa obodo gbara ya gburugburu.
Lomnice nad Popelkou (German Lomnitz an der Cinderella) bụ obodo dị na Semily District na Liberec Region. E nwere ihe dị ka mmadụ narị ise na iri ise. Ọ dị na ndagwurugwu sara mbara nke Osimiri Cinderella na mbara ala na-adọrọ adọrọ na ókèala Bohemian Paradise na Ugwu Giant, ihe dị ka kilomita 5 ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ nke obodo Semily.
Ugbu a, obodo ahụ na-enye egwuregwu na ihe omume ọdịnala (ihe nkiri, sinima, chateau, ebe a na-edebe ihe mgbe ochie na ebe a na-ahụ maka ya, ebe ihe nkiri, ebe a na-egwu egwuregwu, ice ice, ebe egwuregwu ikuku, na-arịgo mgbidi, skai ntụrụndụ na Cinderella nwere nlere anya nlere anya nlere na mmiri ndagwurugwu, egwuregwu ọdụ ụgbọ elu, ebe igwu mmiri, ụlọ spa. Site na netwọkụ dị mkpirikpi nke usoro ịkwọ ụkwụ, ụzọ ụkwụ na ebe sọọsọ, ọtụtụ ebe ndị njem dị ka ụlọ elu na-elegharị anya, ụlọ ebe a na-ere nri na ebe a na-anọ efe ozi oge a na ugwu Tabor…
Drábské světničky bụ ihe foduru nke ụlọ ochie nke e ji osisi rụọ n’elu drọbo nke dị na Dastbot n’obodo Mladá Boleslav, kilomita 4 n’ebe ọwụwa anyanwụ nke Munich Hradiště. Ọ dị na mpaghara ahụ echedoro nke Bohemian Paradise, na mpaghara nke NATURA 2000 sistemụ nke Europe dị mkpa yana idobere ihe okike Příhrazské skály. E wuru ebe ewusiri ike n’elu ugwu ọdịda anyanwụ nke ala dị larịị a na-akpọ Hrada n’ebe ịdị elu dị ihe dịka 370 m asl (105–155 m n’elu Osimiri Jizera). Echebe nnukwu ụlọ a kemgbe 1958 dịka akụkụ nke nnukwu ihe ncheta ọdịnala na-enweghị atụ, gụnyere mpaghara sara mbara nke Hradiště ugwu dị n'akụkụ Klamorná. Onye nwe ala ahụ nwere ogige ụlọ bụ Czech Republic, ndị Lesy České republiky na-ahụ maka nlekọta na nlekọta nke ihe ncheta ahụ.
Dabere na akwụkwọ mgbe ochie, e guzobere ebe ewusiri ike nke aha a na-amaghị aha ya na narị afọ nke abụọ nke 13th, n'oge nnukwu ọrụ nke ndị Cistercians nke Hradiště. Drábské světničky na Klamorná nke dị nso na mgbidi nke Staré Hrady dị nso na Příhraz ọ dịkarịa ala na mbụ ghọrọ onye…
Lookout ụlọ elu U borovice Roprachtice Vysoké nad Jizerou
Ọ bụ ụgbọala…
Iti mmiri ide mmiri na Hrabačov na nso Jilemnice
N'ihe ọ bụla ị ga - eme ka ọ dị mma, V poválečných letech se zde namalmenmen. Ọ bụ site na nke a site na magazin. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ị na-ahọrọ na ị na-ahọrọ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-achọ 100 na-enyere gị aka na 8 ebe a.
N'ala ala okwute ndị a, ma ọ ka nwere ike bụrụ ụgbọ ochie ochie idei mmiri, ihe fọdụrụ n'okporo ụzọ na igwe, dị ka ihe ndị ọzọ na-egwu ala n'oge gara aga. Ọbụna na 70s na 80s nke narị afọ nke iri abụọ, o doro anya na enwere mmiri doro anya, mana ị gaghị ahụ ya tere aka. E zoro ebe a na-egwu olulu n'etiti osisi na-emebi emebi ma ị gaghị ahụ ọnụnọ ya ọbụlagodi n'okporo ụzọ dị n'akụkụ ihe dịka mita 150 dị anya. Ka ọ dị ugbu a, okwute a bụ ihe nwute na akụkụ ya kachasị elu na-ebo ndị mmadụ ebubo n'ụzọ na-ezighi ezi, ụdị ebe obibi na ebe obibi a na-emebi emebi.
Enwere ọtụtụ anụmanụ pụrụ iche ma chekwaa chọrọ ụlọ a pụrụ iche. Na na…
Mkpọmkpọ ebe nke Brada Castle
Brada bụ ụlọ mbibi, nke dị nso na obodo Brada na district nke Jičín na ugwu nke otu aha. Kemgbe 1964, e chebere ya dị ka ihe ncheta ọdịbendị.
Ndị a bụ ndị fọdụrụ obere nke nnukwu ụlọ ọ tọrọ ntọala na 13. Century nke ezinụlọ Ronovec. Ihe mbụ e dere banyere ụlọ a bụ ụbọchị 1258. Na 1304, Eze Václav Wenceslas wepụrụ ụlọ a. Brada wee ghọọ ngwá ahịa eze maka mgbanwe maka obodo Šittary. Ogologo oge ole ka nnukwu ụlọ ahụ nọgidere na aka eze adịghị edozi. 1371 meriri ụlọ nke Vartemberk, 1434 ketara ya Machna z Veselé na Hasek si Valdštejn. Mgbe Hašek nwụsịrị, Markvart si na Laboune, bụ ebe njedebe nke 15 nọ na-ejide ụlọ ahụ. narị afọ nke Mikuláš Licek nke Rýzmburk nwere. Na 1500, Brada na-akọ na ọ bụ ebe tọgbọrọ n'efu.
N'oge agha Prussian-Austrian na 1866 ndị agha Austria nwere otu n'ime ebe ndị agha na-agbachitere ịbanye na Jičín. Icheta agha Jičín, obe obe nke akpuru akpu nke St. Peter na St. Paul, ndi nsọ abụọ,…
Humprecht bụ obodo a na-ekwukarị na mpaghara Jičín nwere usoro ụlọ pụrụ iche, nke e wuru na 1666–1668. Ọ dị na PLA Bohemian Paradise, ihe dị ka 0,5 km northwest nke Sobotka, na ókèala cadastral nke otu aha.
Humprecht bụ ụlọ ebe ịchụ nta ma bụrụ ebe obibi oge ọkọchị nke Humprecht Jan Černín nke Chudenice, onye nnọchi anya alaeze ukwu na Venice. Ndi Carlo Lurago mebere uzo a dika uzo Mannerism, ma site n'oge nke Renaissance na mbido Baroque, ikekwe dika onodu nke ulo oru Galata na Constantinople. Ọ bụ ndị rụrụ arụ bụ nke weere ọnọdụ na 1666–68 ka Francesco Ceresola duziri ya, onye rụkwaa chateau mgbe ọkụ nwesịrị n'afọ 1678 wee mụbaa ya n'otu ụlọ. Ka osiladi, a tufuru ntọ-ala ya, yabụ a ga-akwatu ulo nile nke ala ulo wusikwara ntọala ya na okwute aja. E debere ọla edo dị mma n'elu n'afọ 1829 kama ịgbado Slavic mbụ sitere na mbụ n'ihi asịrị na-ekwu na a tụrụ Heřman Černín mkpọrọ na Turkey.
Mgbe Černín na chateau zụtara na 1738 site na ezinụlọ Netolický (Václav Kasimir Netolický si Eisenberg), mana jiri nwayọ…
Vilémov, Rokytnice nad Jizerou, Ugwu Oke
Enwere mpaghara anọ nke cadastral na ngụkọta: Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytno na Krkonoše na Františkov na Krkonoše. N'ihe banyere ndekọ, a na-ahụkwa mpaghara mpaghara Hleďsebe, Hranice na Studenov n'ime Dolní Rokytnice.
Ihe dị n'agbata Dolní na Horní Rokytnice na-aga site na mbara ihu n'ihu…
Foto nke ikuku Trosky Bohemian Paradise
Mkpọmkpọ ebe nke Trosky Castle dị na elu ugwu nke otu aha (488 m), na obodo nta nke Troskovice na Semily nke mpaghara Liberec. Ọ dị na mpaghara Bohemian Paradise echekwara Landscape Mpaghara yana Bohemian Paradise Geopark, na 2015 bụ nke mbụ ụdị a sitere na Czech Republic ka agụnyere na netwọkụ geopark ụwa UNESCO. Thelọ a bụ nke steeti (nke National Heritage Institute na-elekọta) ma mepee ọha.
Mbibi ahụ bụ ihe nnọchianya nke Paradaịs Paradaịs na otu n'ime ụlọ ndị kasị eleta na Czech Republic. N'elu elu nke ugwu ahụ, e nwere ebe nchekwa nke ncheta nke Trosky. Ugwu bụ ebe kasị elu nke ugwu. Ebe dị elu nke ụlọ elu (Panna Tower) bụ 514 mita.
E wuru nnukwu ụlọ dị n’ime n’etiti ọkpọkọ abụọ a na-eji agba frem, bụ́ ndị ọnụ ụzọ ha na-agaghị abanye na ya wuo ụlọ elu. Site na ndịda nnukwu ụlọ ndagwurugwu a na-echekwa ya, na ebe ugwu. N'elu ala, ogwe ọzọ dị obosara (nke dị mita 47), a na-akpọ Baba, bilitere ala ala, ụlọ elu pentagonal. N'ebe ọwụwa anyanwụ, ebughibu ibu ...
Mmepe nke N'st Níjka Castle sitere n'elu
Nístějka bụ mkpọmkpọ ebe nke nnukwu mkpọda n’elu mkparịta ụka dị n’elu oke mmiri Jizera na ndagwurugwu nke Farsk and na-eso ụzọ I / 14, n’ókèala otu ihe ncheta eke ahụ. Enwere ike ịnweta ya site na njem njem odo na Vysoké nad Jizerou. A na-echebe ozu nke obí eze dị ka ihe ncheta ọdịbendị.
Echere na e wuru obí eze ahụ na ọkara mbụ nke narị afọ nke iri na anọ, mana enweghị ndekọ ederede ede banyere ya. N'okwu a, onye wuru ya nwere ike ịbụ Heník nke Wallenstein, onye sitere na 1369 soro ya ma dee. Ebe e dere aha mbụ banyere ụlọ nzukọ ahụ ruru otu afọ ahụ. Eleghị anya ọrụ nnukwu ụlọ ga na-eche ụzọ obodo ahụ na ndagwurugwu Jizera. N'ihi ika nke Wallenstein na enweghi ebe ederede, o siri ike ikpebi onye nwere ụlọ ụlọ n'oge ahụ. O doro anya na n’afọ 1399 Hynek nke Wallenstein dere mgbe nke Bayanstějka na 1406 Jindřich dere. Kaosinadị, n’afọ na-eso ya, Jindřich nke Vartenberk nwere oche ebe a, bụ onye na 1404 nwetara Wallenstein Castle. Na 1422, Nístějka dị n'aka ndị nwenụ nke Jenštejn n'otu n'otu. Wenceslas nke Jenštejn na…
Ndọ mmiri Labská ma ọ bụ ebe nchekwa Labská (nke bụbu ebe a na-edebe klọpị Krausova) bụ olulu mmiri wuru na Elbe na nsọtụ Špindlerův Mlýn na akụkụ ya nke Labská. E wuru ya n’agbata 1910 na 1916, nke mbu dika nchebe ide mmiri. Ọ bụ ọkwa kachasị elu nke sistemụ mmiri na-arụ na Osimiri Elbe, bụ nke na-ejide ihe ka ukwuu na mmiri snow n'akụkụ etiti ugwu Giant. Kemgbe 1994 otu obere ọkụ eletrik na-arụ ọrụ na dam. Ihe mgbochi mmiri ahụ dị mita 41,5, ogologo 153,5 na obosara 55. Ogologo mmiri nke mmiri bụ 1,2km, mpaghara ya bụ 40 ha. N’elu mmiri mmiri, enwere uzo mmiri II / 295 nke etinyere n’afọ 80, tụọ nha mita 120, ogidi ya kacha elu dị mita 30.